Indlela yokuyeka izithombe zocansi | Isisekelo Semivuzo: Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Indlela yokuyeka izithombe ezingcolile?
Izinkulungwane eziningi zamadoda emhlabeni wonke ziye zazuza ngokuyeka izithombe zobulili ezingcolile. Kodwa, ungayenza kanjani?
Kunezinyathelo ezintathu ezibalulekile…
Okokuqala, udinga ukubona ukuthi kunenkinga yamanje noma engenzeka
Okwesibili, udinga ukuthola indlela yokuma. Lokhu kusho ukususa zonke izithombe zakho zobulili ezingcolile kanye nokuphula izixhumanisi ezinikezelayo
Okwesithathu udinga ukuthola imisebenzi ehlukile ukuze uqinise ingqondo yakho, umzimba kanye nokuphila komphakathi
Ukuyeka izithombe zobulili ezingcolile uhambo oluhlukile kuwo wonke umuntu. Bonke ubuchopho buhlukile, ngakho-ke inqubo yokuyeka isezandleni zomuntu ngamunye. Abanye bakuthola kunzima, kuyilapho abanye benganquma ukuma bese benza kanjalo ngaphandle kwenkinga enkulu.
Kulesi sigaba I-Foundation Reward isingenise amathuluzi nemigomo ethile ukuze ukwazi ukukusiza, noma umuntu omnakekelayo, ukuthola amandla nokuzimisela ukubalekela ekusebenziseni ukusetshenziswa kwe-intanethi ye-intanethi. Simboza ngokugcwele ukuyeka uhambo lwezocansi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Inhlanhla ekwakheni ikusasa elingenasipiliyoni kanye nokuthola impilo ethandekayo yothando nomlingani wangempela kunalokho.
Ukuhlolwa kocansi kwamadoda
Ukuhamba nge-porn mahhala
Imodeli yokutakula isinyathelo esilandelayo se-Reward Foundation.
Uhlelo lwe-Reward Foundation lwezinhlelo ezintathu zokuvimbela